[25 / 03 / 2020] နောက်ဆုံးမိနစ် - ကျောင်းအားလပ်ရက်ကိုတိုးချဲ့ခဲ့သည် 30.April.2020	coronavirus
ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာန Corona ဗိုင်းရပ်စ်စစ်ဆေးမှုကို Enable!
ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာန Corona ဗိုင်းရပ်စ်စစ်ဆေးမှုကို Enable! ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသည်နိုင်ငံသားများအတွက်အွန်လိုင်းတွင် Corona ဗိုင်းရပ်စ်စစ်ဆေးမှုကိုစတင်ခဲ့သည်။ Corona ဗိုင်းရပ်စ်စစ်ဆေးမှုကိုအင်တာနက်မှမည်သို့ပြုလုပ်သနည်း။ အွန်လိုင်း Corona ဗိုင်းရပ်စ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင်ယခုဖြစ်သည်။ Korona [ပို ... ]
သေမှတ်ပုံတင်မည်နံပါတ် 9: တူရကီနိုင်ငံ Corona ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏ balance!
ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီး Fahrettin Koca ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသံသယရှိသူ ၃၆၅၆ ယောက်ကိုပြီးခဲ့သည့် ၂၄ နာရီအတွင်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ 24 အပြုသဘောဆောင်ရလဒ်။ လူနာအရေအတွက် 3656 ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ခုခံနိုင်စွမ်းအားနည်းသောအခြားသက်ကြီးရွယ်အိုလူနာငါးယောက်မှာဆုံးရှုံးခဲ့ရသည် [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ် Metropolitan မြူနီစီပယ် (IMM) သည်၎င်း၏ coronavirus တွင်သတင်းအချက်အလက်အမြောက်အများကို၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ http://www.ibb.istanbul လိပ်စာသို့ည့်သည်များသည်ပေါ်ပေါက်လာသည့်အတွက်ရောဂါအကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရရှိလိမ့်မည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံး [ပို ... ]
Bursa Metropolitan မြူနီစီပယ်၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီ, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်သားများpublicပြီလ5ရက်အထိအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များကနေအခမဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ရှိလိမ့်မည်။ Bursa Metropolitan မြို့တော်ဝန် Alinur Aktaşသည်သူ၏တရားဝင် Twitter account တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ “ Aprilပြီလ ၅ ရက်နေ့မှာ [ပို ... ]
Elazığမြူနီစီပယ်သည် Corona ဗိုင်းရပ်စ်ကိုတိုက်ဖျက်ရာတွင်စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံလုပ်ဆောင်နေသည့်ကျန်းမာရေးလုပ်သားများသည် ၂၀၂၀၊ 10ပြီ ၁၀ ရက်အထိအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များမှအခမဲ့အကျိုးကျေးဇူးရရှိနိုင်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ Corona ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနှင့်အတူ [ပို ... ]
Kahramanmaraşမြို့တော်စည်ပင်သာယာမှမြို့တော်ဝန် Hayrettin Güngörကပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုသည်ကျန်းမာရေးလုပ်သားများအတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ Kahramanmaraşမြို့တော်စည်ပင်သာယာမှမြို့တော်ဝန် Hayrettin Güngör၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကိုသက်ရောက်သော coronavirus ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအတွင်းကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူများ။ [ပို ... ]
Balıkesirတွင် ၆၅ နှစ်ကျော်ဘတ်စကားအသုံးပြုမှု ၅၀% ကျဆင်းခဲ့သည်
coronavirus ၏ဆိုးကျိုးများကိုလျှော့ချရန်စတင်ခဲ့သော #evdekal ကြွေးကြော်သံကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ Balickesir တွင်နေထိုင်သောအသက် ၆၅ နှစ်ကျော်သူများသည်ကပ်ရောဂါရောဂါအတွက်အန္တရာယ်အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောသတိပေးချက်များကိုလိုက်နာကြသည်။ မတ်လပထမအပတ်က 65 123 [ပို ... ]
Denizli Metropolitan Municipality Bus Terminal မှထွက်ခွာသောခရီးသည်တင်ယာဉ်အားလုံးတွင် Corona ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မှုကိုစတင်ခဲ့သည်။ လျှောက်လွှာ၏အတိုင်းအတာအတွင်း disinfect မခရိုင်ခရီးသည် Denizli Metropolitan မြူနီစီပယ်၏ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်စတင်ခဲ့သည် [ပို ... ]
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များကိုမကြာခဏဆိုသလို Manisa တွင်ပိုးသန့်ဆေးခံရသည်
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များတွင်ပိုးမွှားသန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားမှုဖြင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည့် Manisa Metropolitan မြူနီစီပယ်၊ နေ့စဉ်သောင်းနှင့်ချီသောလူများအသုံးပြုသောအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုမကြာခဏပိုးမွှားသောအဖွဲ့များ၊ [ပို ... ]
Kayseri မြို့တော်စည်ပင်သာယာ၏မြို့တော်ဝန် Memduh Büyükkılıçကကမ္ဘာကိုသက်ရောက်မှုရှိသော coronavirus ဝိုင်းရံခြင်းကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများ၏အားစိုက်ထုတ်မှုကြောင့်ကျော်လွှားလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ မြို့တော်ဝန်Büyükkılıç, ဒါကြောင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်များသည်ဤဖြစ်စဉ်တွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြproblemsနာများမရှိပါ။ [ပို ... ]
IMM မှဘာသာစကားငါးမျိုးဖြင့် Coronary Virus ကိုတွန်းလှန်ပါ
coronavirus ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအစီအစဉ်များစွာကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သော Istanbul Metropolitan Municipality သည်အများပြည်သူအားမှန်ကန်စွာအသိပေးနိုင်ရန်ကာတွန်းကားများကိုဘာသာစကားငါးမျိုးဖြင့်ပြင်ဆင်ထားသည်။ မျှတပြီးအားလုံးပါ ၀ င်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည့်နိယာမနှင့်အညီချမှတ်ပြီး IMM [ပို ... ]
B ဘီဘီစီဥက္ကamo္ဌ Ekrem amomamoğluသည်တယ်လီဖုန်းကွန်ဖရင့်ကို အသုံးပြု၍ သူ၏ ၀ န်ထမ်းများနှင့်တကယ့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင်အသက်ရှင်ခဲ့သည်။ အီမိုမိုဂလူသည် coronavirus ကူးစက်ရောဂါကြောင့်နိုင်ငံသားများအားဆုံးဖြတ်ချက်အသစ်များကိုပြန်လည်ဝေငှခဲ့သည်။ [ပို ... ]
Ankara Metropolitan Municipality မှ coronavirus အားဆန့်ကျင်သောဆောင်ရွက်ချက်များအတိုင်းလက်ဖြင့်ပိုးသတ်ဆေးအရောင်းစက်များကို Metro, ANKARAY နှင့် Cable Car Stations များတွင်စတင်တပ်ဆင်ခဲ့သည်။ Ankara မြို့တော်ဝန်မြို့တော်ဝန် Mansur Yavaş၏နိုင်ငံသားများအသုံးပြုသောညွှန်ကြားချက် [ပို ... ]
မိသားစု၊ အလုပ်သမားနှင့်လူမှု ၀ န်ဆောင်မှု ၀ န်ကြီး Zehra ZümrütSelçukက coronavirus ကပ်ရောဂါကြောင့်မျက်နှာဖုံးနှင့်မွှေးဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုစတင်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော် ၀ န်ကြီးချုပ်Selçukကဆင်းရဲနွမ်းပါးသောပြည်သူများအား ၂ ဘီလျံပေါင်အကူအညီများကိုဖြန့်ဝေမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ [ပို ... ]
Ak Disaray Tram Stations မှာလက်ပိုးသတ်ဆေးကိရိယာများတပ်ဆင်ထားသည်
TransportationPark သည် Kocaeli Metropolitan မြူနီစီပယ်၏တွဲဖက်များအနက်တစ်ခုဖြစ်သော coronavirus (COVID-19) ကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသသောကြောင့်နိုင်ငံသားများအတွက်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးအစီအမံများကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤအခြေအနေတွင်ဘတ်စ်ကားနှင့်လမ်းရထားများပုံမှန်သန့်ရှင်းသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပန်းခြံဖြစ်သောAkçaray [ပို ... ]
အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်၎င်းတို့၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုတရုတ်မှဥရောပသို့အီး - ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွင်တည်ထောင်ထားသောထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဌာန ၁၁ ခုသို့ပို့ဆောင်ပေးမည်။ နိုင်ငံပေါင်းရှိရာအဖွဲ့အစည်းကမှတင်ပို့ဖို့ ... ဥရောပနှင့်အတူတူရကီ, အရှေ့အလယ်ပိုင်းအကြားတစ်ဦးအလွန်အရေးကြီးသောပထဝီအနေအထားအဖြစ်နိုင်တော့မည်မှစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးလို [ပို ... ]
ခရီးသည်များနှင့် ၀ န်ထမ်းများအားကားရပ်နားရန်နေရာနှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်အသစ်တစ်ခုချမှတ်ခြင်းအားဖြင့်ယာဉ်ရပ်နားရာနေရာသည်စတင်ဝန်ဆောင်မှုများစတင်နေပြီဟု Istanbul လေဆိပ်အော်ပရေတာİGAမှကြေငြာခဲ့သည်။ [ပို ... ]
ကြောင့်ကုမ္ပဏီမှတူရကီသမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံတော်မီးရထားအပြီးအပိုင်အလောင်းတော်ထားရာ၌စွပ်စွဲချက်နှင့် ပတ်သက်. ပြီးခဲ့သည့်TÜVASAŞဝန်ကြီး Turhan နောက်ဆုံးအချက်အတွင်းနှစ်ခုသည်အခြားTÜRASAŞနှင့်အတူပေါင်းစည်း။ တူရကီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး - ဆီဥက္က္ဌ [ပို ... ]
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃ ရက်နေ့တွင်သေဆုံးသွားသောMüslümGürses၏ဇနီး Muhterem Nur ကိုBeylikdüzüပြည်နယ်ဆေးရုံမှBakırköyမှကုသပေးခဲ့ပြီးသူသည်အချိန်အတန်ကြာကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်ကုသခံခဲ့ရသည်။ Sadi Konuk လေ့ကျင့်ရေးနှင့်သုတေသနဆေးရုံမှာဒီ [ပို ... ]
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: မတ်လ 26 1918 Hejaz မီးရထားတွင်